नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): प्रचण्ड र बाबुराम कामरेडको असलियत नबुझ्ने बुझक्कडहरु हो हेर यो भिडियो फेरी एक पटक, अनी छातीमा हात राखेर सोंच यदी तिम्रो आफन्त यसरी मारिएको भए ?????
प्रचण्ड र बाबुराम कामरेडको असलियत नबुझ्ने बुझक्कडहरु हो हेर यो भिडियो फेरी एक पटक, अनी छातीमा हात राखेर सोंच यदी तिम्रो आफन्त यसरी मारिएको भए ?????
यसरी नै माओवादीले हजारौँ को हत्या गर्दै सत्तामा पुगेका हुन, कानुन को पालना नभएको देश नेपाल भएर मात्र उनीहरु आज सत्ताका मालिक भएका छन यदी अरु देशमा भएका भए प्रचण्ड र बाबुरामहरु आज अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुर्याइने थिए, झुन्ड्याइने थिए तर शतिले श्राप गरेको नेपाल न पर्‍यो, उनिहरुले अझै उल्टै अरुलाई झुन्ड्याउंदैछन, कती खेर त लाग्छ कहाँ छ भगवान ? कहाँ छ सत्य न्याय र धर्म भन्ने कुरा ?? होइन र ?????
लाजै लाग्ने कुरा आज यस्ता अपराधीहरुको पछाडि मान्छेहरु कुँदिरहेका छन, उनिहरुको गुणगानमा ब्यस्त छन, अझ भन्दै छन यिनीहरुलाई काम गर्न देउ रे !